Ny fisehoan'ny Overtraining dia mahazatra indrindra amin'ireo atleta te-hahazo hozatra haingana, na mila mandray anjara amin'ny fifaninanana sasany. Mianara bebe kokoa momba an'ity olana ity sy izay tokony hataonao mba hialana amin'ny fampiofanana be loatra.
Inona no atao hoe Overtraining?
Ny overtraining dia fitenenana ampiasaina hanehoana ny fampihetseham-batana loatra. Olana iray mitranga isaky ny manao fanazaran-tena ara-batana bebe kokoa noho ny vitan'ny vatany sitrana ny atleta. Izany dia mitranga rehefa manao fiofanana ilay olona, ​​amin'ny fomba tsy mety, tsy manaja ny vanim-potoana fanarenana na ny fe-potoana farany.
Ilaina ny mahatakatra fa tsy ao anaty gym no ahazoanao tavy sy tanjaka hozatra, fa ivelan'io. Rehefa averin'ny vatana miadana ny vatan'ny hozatra izay voakasik'izany nandritra ny fiofanana.
Ankoatry ny fampihetseham-batana be loatra sy ny tsy fisian'ny fitsaharana mety, ny anton-javatra hafa koa dia misy ifandraisany amin'ny Overtraining, toy ny: fiankinan-doha, tsy fihinanan-tsakafo ary fihenjanana.
Ny fanatanjahan-tena dia zavatra tena mifaninana amin'ny natiora. Miaraka amin'ny fampahalalana marobe, ny fikarohana mifandraika amin'ny sehatra, ny physiologists, ny mpanazatra ary ny atleta dia mianatra bebe kokoa momba ny drafitra fanofanana. Araka izany, vokatr'izany dia misy fiovana ny fomba fiofanana.
Ny famehezana ny drafitra fanofanana nosintonina miaraka amin'ny fotoana kely fanarenana, miaraka amin'ny fahaverezan'ny fahombiazana maharitra (manampy herinandro na volana maromaro), dia miteraka Overtraining.
Midika izany fa tena ilaina ny miala sasatra aorian'ny fampihetseham-batana. Eny, tena ilaina tokoa io fitsaharana aorian'ny fiofanana io mba hisorohana ny Overtraining.
Matetika matetika no dinihina amin'ny atleta, ny Overtraining dia vokatry ny antony mifandraika amin'ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fihenjanana.
Noho izany dia ilaina ny manao fanombanana ara-batana alohan'ny hanombohana fanatanjahan-tena. Ankoatry ny famolavolana drafi-panofanana arakaraka ny haavon'ny fahasalamanao.
Rehefa be loatra ny vatana ary mihasosotra dia manomboka mahatsikaritra ilay atleta fa tsy mahazo vatan'ny hozatra izy. Noho izany, ity dia iray amin'ireo soritr'aretin'ny Overtraining, fa ny vatana koa dia manome famantarana bebe kokoa alohan'ny hitrangan'izany.
Raha hainao ny mamantatra ireo soritr'aretina dia mora kokoa ny misoroka an'io fahasimbana io alohan'ny hiteraka olana lehibe amin'ny fivoaranao ara-batana. Zahao hoe:
Ny vokatry ny fanazaran-tena dia tsy miseho, noho ny tsy fahampian'ny vola miditra.
Mitombo ny fitempon'ny fony rehefa miala sasatra.
Tsy manana hery sy fironana hanatanteraka ny fampiofanana azy ilay atleta.
Matetika dia maharary ny hozatra amin'ny fampihetseham-batana farany. Na izany aza, io soritr'aretina io dia manan-kery ihany ho an'ny olona efa manao fanazaran-tena efa ela, satria ny vao manomboka rehetra dia mahatsapa ny hozatra maratra hatramin'ny voalohany.
Sarotra amin'ny torimaso, mitarika amin'ny tranga tsy fahitan-tory matetika.
Ny fahasosorana sy ny fiovaovan'ny toe-po.
Amin'ny toe-javatra tsy fahita firy, ny fahaketrahana.
Raha fantatra fa mijaly amin'ny Overtraining ny atleta dia ilaina ny miala sasatra. Na dia sarotra ho an'ny atleta sasany aza ny fialan-tsasatra amin'ny fiofanana dia ilaina mandritra ny dimy ambin'ny folo andro farafahakeliny ny fotoana fialan'izy ireo.
Mba hisorohana ny fisehoan'ny Overtraining dia ilaina ny mandray fihetsika sasany amin'ny fiofanana isan'andro. Amin'izany dia ho azo atao ny mahazo vokatra tsara.
Voalohany, alamino ny fitsaharanao, satria tsy mahasoa anao ny manao fanatanjahan-tena isan'andro amin'ny herinandro raha tsy miverina eo anelanelan'ny fanazaran-tena ny vatanao.
Ilaina ihany koa ny miala sasatra amin'ny alina, izany hoe matory tsara. Izany dia mampihena ny vitan'ny atleta ho an'ny fampihetseham-batana loatra ary koa hialana amin'ny fampiasana fanampin-tsakafo mampihena ny torimasony.
Atsaharo ny fanazaran-tena hafa izay mahery, ary makà fitsaharana mandritra ny andro. Zava-dehibe ny fampihenana ny adin-tsaina isan'andro.
Ahoana no fanasitranana ny Overtraining?
Fa raha efa mijaly amin'ny Overtraining ianao dia manatona dokotera raha misy fanombanana hahalalana ny faritra manokana amin'ny vatanao izay mila fitandremana bebe kokoa. Ho fanampin'izay, tsy maintsy hajainao ny elanelam-potoana sisa tavela eo amin'ny fanazaran-tena.
Ny fisotroana rano betsaka dia tena ilaina mba hanampiana amin'ny hydration sy ny fiasan'ny hozatra mety. Ny fanarahana ny sakafo ara-dalàna dia tena zava-dehibe ary mitandrina ny famantarana omen'ny vatana.
Mba hananana vokatra tsara amin'ny fiofanana sy hisorohana ny fampiofanana be loatra, tena ilaina ny misakafo tsara. Rehefa misy fiofanana mavesatra dia mila otrikaina ny vatana amin'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fitomboan'ny hozatra.
Ny sakafon'ny fanatanjahan-tena dia tsy maintsy misy proteinina, gliosida ary tavy, ka ny fanasitranana hozatra dia mety eo anelanelan'ny fotoam-pampiofanana.
Noho izany, mihinana voankazo sy legioma izay loharano tena ilaina amin'ny vitamina sy mineraly amin'ny fitomboan'ny hozatra, ankoatry ny fanomezana angovo bebe kokoa ho an'ny fanatanjahan-tena.